आफुमा परिवर्तन चाहनुहुन्छ ? आजैबाट किताब पढ्न सुरु गर्नुहोस ! – Artha Rajniti – A complete digital NEWS अर्थ राजनीति
आफुमा परिवर्तन चाहनुहुन्छ ? आजैबाट किताब पढ्न सुरु गर्नुहोस !
अर्थ राजनीति । हामीले सानो उमेर देखिनै किताब पढीरहेका हुन्छौ र हामीले किताब पढेर कहिले सक्दैनौ । किताब पढ्ने व्यक्ति र नपढ्ने व्यक्तिमा निकै फरक पाइन्छ । किताब पढ्ने व्यक्तिले हरेक कुराको सजिलै तर्क दिन सक्छ भने किताब नपढ्ने व्यक्तिलाई तर्क दिन एकदमै कठिन हुने गर्दछ । किताब पढेपछि धेरै कुराहरुको ज्ञान पनि प्राप्त हुने गर्दछ । नियमित किताब पढ्ने व्यक्तिको आयु पनि लामो हुन्छ । किताब पढ्ने व्यक्ति आफ्नो स्वाथ्यलाई कसरी तन्दुरुस्त राख्ने र आफ्नो दिमागलाई कसरी ताजा राख्ने भन्ने कुरामा जानकारी योग्य हुन्छन् । केहि कुराको ज्ञान लिन र जीवनलाई सफल बनाउन हामीले नियमित किताब पढ्ने बानि गर्नु पर्छ ।
अमेरिकी दूतावासद्वारा सबै भिसा र अन्तरवार्ता रद्द
के तपाई सुखी हुन चाहनुहुन्छ ? आजै यी बानि हरु त्यागी दिनुहोस !
कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ फैलन नदिन सुदूरपश्चिमका नाकामा कडाइ
ओम्रीकान भेरियन्ट डेल्टा, गामा, बेटा र अल्फाजस्तै ‘भेरियन्ट अफ कन्सर्न’
अष्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा खुलाउन पुनर्विचार गर्ने